Vatambi veMultimedia yeGnu / Linux; mapurogiramu akanakisa ekuona mafirimu uye kuteerera mimhanzi | Linux Vakapindwa muropa
Zvichida vese vashandisi parizvino vanoziva chinonzi multimedia player, asi pano hatisi kuzotsanangura kuti chii chinonzi multimedia player asi ndedzipi sarudzo dzakanakisa dziripo dzeGnu / Linux. Tichatarisa kune anozivikanwa uye kwete iwo chete anoridza odhiyo kana chete vhidhiyo. Mune ino runyorwa isu takasanganisira akanakisa odhiyo vatambi uye ayo ayo kuwedzera kune odhiyo anogona zvakare kutamba vhidhiyo.
Iye zvino, vese vezvenhau vatambi vanotsvaga kupa kupfuura kungo ridza maodhiyo kana mavhidhiyo mafaera, tsvaga kupa kubatana nevechitatu-bato masevhisi, kutaurirana nemidziyo kana zvakananga kuve imwe yeakareruka uye asingareme zvirongwa zveyese inoshanda system.
11 Ndeupi wandasarudza?
Mutambi wemultimedia ane mukurumbira pane vese anonzi Rhythmbox, mutambi akabatanidzwa mune yeGnome desktop uye izvo zvazivisa kune vese. Kunge mamwe mapurogiramu eiyo genre, Rhythmbox inoenderana zvizere nemafaira odhiyo, asi inopa chimwe chinhu zvakare. Rhythmbox haingotsigire akasiyana-siyana masevhisi echitatu-akadai seLast.fm, Soundcloud kana Jamendo asi inogona zvakare kubatana neepodcast uye mamwe masevhisi nekutenda kune mukana wayo wekuwedzera kuburikidza newedzero.
Rhythmbox inotsigira playlists uye ine online radio sevhisi iyo inotibvumidza isu kuteerera redhiyo tisina ichi chishandiso. SaAmarok uye zvimwe zvirongwa zvekudyidzana senge iTunes, Rhythmbox inobvumidza kuwiriraniswa kwemimhanzi pakati pekombuta yedu uye nezvimwe zvishandiso senge mp3 kana iPod. Tinogona kuwana iyi multimedia player mune yepamutemo marekodhi ezvose zvinogoverwa sezvo iri mukati meGnome.
Cantata mutambi wemimhanzi unouya wakazara nePlasma desktop. Iyo purogiramu inopa mhinduro inokurumidza uye yakapusa kune vashandisi veiyo KDE desktop. Iyo haibvumidze kutamba mavhidhiyo kana mimhanzi mafaera mashoma anozivikanwa asi mukudzoka isu tichawana kutsvaga kwemimhanzi mafaera kuburikidza madhairekitori, kutaurirana nezvimwe zvigadzirwa zvemimhanzi uye iko kugona kwekubatanidza uye kurodha pasi mafaira kubva kumimhanzi masevhisi kuburikidza nekumhanyisa kana nemasevhisi epodcast. Iyo yepamutemo Cantata webhusaiti iri ndizvo.
VLC yakazvarwa makore mashoma apfuura uye yakakurumidza kuve mambo wevatambi venhau. VLC mutambi anotamba chero mhando refaira pasina kuda kuwedzerwa zviwanikwa. Ose mavhidhiyo uye odhiyo zvinoenderana nechirongwa ichi chinoita kuti vashandisi vave nechirongwa chimwe chete pane maviri. Munguva yazvino vhezheni VLC yaisanganisira rutsigiro rweChromecast uye kutaurirana nemasevhisi seYouTube, izvo zvinoita kuti zvinyanye kunakidza.
Asi, zvese zvine divi rakashata. Shanduro dzichangoburwa dzeVLC dzinorema kupfuura shanduro dzekutanga uye izvo zvaita kuti vashandisi vazhinji vane makomputa ane zviwanikwa zvishoma, tsvaga dzimwe nzira. VLC inowanikwa munzvimbo dzekuchengetera zvese zvakagoverwa neGnu / Linux asi kana tikasaiwana, tinogona kugara tichirodha pasi chirongwa kubva kune yepamutemo VLC webhusaiti.
LPlayer inoridza mimhanzi mutambi unoshanda paUbuntu, Linux Mint uye zvigadzirwa. Iyo yakagadzirwa neanozivikanwa mugadziri Atareao. Chinangwa chayo ndechekupa mimhanzi uye podcast kutamba pasina kushandisa masisitimu ehurongwa. Uye zvakare, mutambi anosanganisa musina kupinda muCinnamon uye Gnome desktops uye inopa kuenderera kwekutamba, kurira kuenzana uye mimhanzi zvinyorwa.
Kuisirwa kwayo kunoitwa kuburikidza nechokunze repository, isu tinofanirwa kuita zvinotevera mune terminal.
Amarok mutambi wenharaunda dzine Qt maraibhurari, kunyangwe mukurumbira wayo zvaireva kuti inogona kushandiswa pane chero desktop. Amarok izere multimedia suite nekuti haina chete kuburitsa odhiyo asiwo zvakare inowirirana nemasevhisi kuburikidza nekushambadzira, podcast, pachako mabasa, etc ...
Amarok inoenderana nemidziyo yekunze iyo yaunogona kuyananisa uye kugovana mumhanzi uye vhidhiyo. Pfungwa isina kunaka yeiyi multimedia player ndeyekushandisa kwayo kwakanyanya zviwanikwa, chishandiso chisina kukodzera kumakomputa ane zviwanikwa zvishoma. Amarok inowanikwa munzvimbo dzinochengeterwa zvese zveGnu / Linux, chimwe chinhu chinoita kuti zvive nyore kuve nechirongwa ichi pane yedu yekushandisa system.
Clementine mutambi anozvarwa kubva kuAmarok asi akagadziridzwa uye akaendeswa kune mamwe mapuratifomu akadai seWindows kana macOS. Clementine haangotamba odhiyo chete asiwoInotsigira echitatu-bato masevhisi akadai seSpotify, Last.fm, Soundcloud, nezvimwe ... uye unogona kutobatanidza ine chaiyo yakaoma dhisiki masevhisi akadai seDropbox, Bhokisi, Dhiraivha, nezvimwe ... kutsvaga mimhanzi uye kutamba mafaera aya.
Clementine mutambi wemimhanzi uyo, saAmarok, anobatana nemidziyo yekunze kune komputa uye anogona kutodzorwa kuburikidza kuburikidza neiyo smartphone nekuda kweiyo app iripo yeApple. Clementine isarudzo huru asi haitsigire mafaira evhidhiyo semamwe mapurogiramu.
Banshee mutambi akazara kwazvo wemultimedia. Iyo haina chitarisiko cheTunes asi inopa zvakada kufanana nebasa raApple. Pamusoro pekuridza odhiyo uye vhidhiyo, Banshee inokutendera iwe kutamba uye kubata zvishandiso zvakaita sePods, Mp3 kana kunyange smarpthones.
Banshee yakabatana nemasevhisi kuburikidza nekushambadzira uye ekubhadhara masevhisi, zvichitibvumidza kuve nemimhanzi uye vhidhiyo kune kwedu kufarira chero nguva. Podcasts aripowo muBanshee pamwe neruzivo rwefaira rakaridzwa padivi repaneru. Banshee aripo mune chero kupihwa kweGnu / Linux kunyangwe isu tichigona kuziva zvakawanda mu yayo yepamutemo webhusaiti.
SMPlayer mutambi wemultimedia akafanana naMiro kana Parole. Mune ino kesi isu tine yakajeka sarudzo iyo ichatibvumidza isu kuona odhiyo uye vhidhiyo mafaera. Yakavakirwa pa iyo MPlayer yakare uye inowanikwa kwete chete yeGnu / Linux asiwo kune mamwe masisitimu anoshanda seWindows kana macOS.
SMPlayer inowirirana neYouTube uye ine subtitle download services, ichibvumira kuona chero bhaisikopo rekunze. Kusiyana nevamwe vatambi, SMPlayer ine ganda kana kuita basa iro Izvo zvichatibvumidza isu kumisikidza chero chinongedzo kana zvakananga mifananidzo yekuparadzira.
Tinogona kuisa SMPlayer mune chero kupi kugoverwa nekutevera matanho anoratidzwa mu webhusaiti yepamutemo yeprojekti.
Parole mutambi wemultimedia yematafura akareruka kana mashoma-ezvishandiso. Inonyanya kuridza mavhidhiyo mafaira, asi inogona zvakare kutamba maodhiyo faira. Izvo hazvipe kuenderana nemamwe masevhisi kana mabasa, iyo inongotamba vhidhiyo uye odhiyo, asi inozviita nemazvo.
Nekudaro, inozivikanwa kwazvo nevashandisi vazhinji vane mwenje matafura kana vari kungotsvaga mhinduro shoma. Parole yakashandiswa pamatafura akaita seXfce kana Lxde saka kana kugoverwa kwedu kune aya madhesiki, ichave iine Parole mumahofisi epamutemo.
Miro mutambi wenhau anotaridzika uye anonzwa kunge iTunes. Miro yemahara multimedia player asi inopa iwo mamwe masevhisi uye ine yakafanana yakafanana ne iTunes. Kwechinguva yaive yakakurumbira asi isu tinofanirwa kutaura kuti kuvandudza kwayo kwakamira uye neshanduro dzayo dzazvino dzichibva muna 2010.
Zvakadaro, kana isu tichida mutambi akafanana neTunes asi izvo hazvipedze zviwanikwa zvakawanda, Miro yakanaka sarudzo. In iyo yepamutemo webhusaiti Tichawana nzira dzekumisikidza zvinoenderana nekuparadzirwa kweGnu / Linux kwatinako.
Vazhinji venyu zvirokwazvo mune kana vane imwe kana kupfuura vatambi vema multimedia, vamwe vachange vachiyedza kana kushandura semhedzisiro yechinyorwa chino. Uye vazhinji venyu muchashamisika kuti mutambi wevhidhiyo wandinoshandisa. He kureurura kuti ndiri VLC Player mudiwa, mutambi wandagara ndichiisa pamakomputa ese andinoshandisa uye andinogara ndichishandisa.
Inoshanda, yakakwana uye komputa yangu inoitsigira zvakakwana. Asi kana ndichifanira kusarudza imwe sarudzo pane VLC, pamwe sarudzo yandaizosarudza ingave Parole kana Amarok, mapurogiramu akazara anopa varaidzo yakawanda kuburikidza nezvakawanda zvemidhiya. Uye newe Ndeipi media player yaunoshandisa?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Vatambi veMultimedia yeGnu / Linux; mapurogiramu akanakisa ekuona mafirimu uye kuteerera mimhanzi
Ini ndinoshandisa Parole muXfce uye ndagutsikana kwazvo. Izvo zviri nyore, zvinoonekwa hazvisi zvakaremerwa nesarudzo uye zvinoita basa razvo zvakakwana. Ehe ini ndakauya ndichibva nekushandisa alsaplayer hahaha
SMPlayer yevhidhiyo, uye VLC uye Clementine yeaudio pasi peKDE Plasma neCinnamon. Parole haina kushata, kunyangwe SMPlayer inoshanda zviri nani kwandiri nemavhidhiyo mafomati mune zvese.
Smplayer yevhidhiyo uye cantata yeaudio, muplasma, neizvozvo ndine zvese zvinyengeri zvangu zvakafukidzwa
MOC yemimhanzi uye Smplayer uye MPV yemavhidhiyo ...
Zvimwe chete, Smplayer yevhidhiyo uye cantata yeaudio, zvakare muplasma, zvinoratidza kuti iwe unoziva
Dj scihacker akadaro
Ini seni, kugara ndakatendeka kuVLC, kubvira mazuva angu eWindowsero. Chechipiri ini ndaishandisa Totem, iyo yakauya muLinuxMint. Pamatafura madiki ndaigara ndichishandisa Xine. Nhasi pafoni yangu ndine Mixxx, VLC, Parole, Vhidhiyo (ex-Totem), Smplayer uye Mplayer. Iyo yekupedzisira inoisa otomatiki iwo ma subtitle mafaera kana ari mune imwechete dhairekitori uye iine zita rimwe chete reiyo vhidhiyo, izvo zvinoita kuti zvive nyore kushandura TV.
Pindura kuna DJ Scihacker
VLC ndiyo yakanyanya kudarika mutambi kunze uko: inoda kuvhara ese aripo maOS uye kutamba zvese nezvakawanda zvekuwedzera, kunyangwe chero mutambi ane MPV ari akaipa.
SMPlayer + MPV ndiyo dick.
Ndakawana Sayonara nguva yapfuura, ndisati ndashandisa Clementine, Amarok, VLC, SMPlayer, Vhidhiyo (ex-totem) uye zvimwe zvandisingayeuke izvozvi uye ndinonyatsoda Sayonara, yakajeka, ndinoda aesthetics uye mashandiro ine.
chokwadi ndechekuti ini ndaida kuziva kuti ndeupi wavo akaburitsa mimhanzi nemhando yepamusoro, asi pamusoro pazvo hapana zvarinotaura, ...